Wholesale Batch Controller Mugadziri uye Mutengesi | ANGJI
Iko kukanganisa kuri pasi pe0.2% FS, uye ine basa rekugadzirisa uye kusefa kwedhijitari, iyo inogona kubatsira kudzikisira kukanganisa kweiyo sensor uye transmitter, uye nekuvandudza kuyerwa uye kudzora kunyatso kweiyo system zvinobudirira;
2. Inoyerera sensor inokodzera zvazvino, voltage uye kupomba kubuda;
3. 3 chinja yekuisa, yekutanga, kupora, uye yega yega yakaunganidzwa kukosha yakabviswa;
4.Point kudzora kuburitsa, kune hombe vharuvhu, diki vharafu hierarchical kutonga uye pakarepo kuyerera muganho aramu;
5.Variable goho inogona kuve yekuyerera kuyerera kukosha muchimiro cheyakajairika ikozvino, kubuda kwemagetsi, kune kumwe kushandiswa kwemidziyo;
6.Iyo chikamu chechisere kururamisa mitsara kunogona kudzikisira iyo isina mutsetse kukanganisa kweyekuyerera sensor;
7.kuyerera kuyerera kunogona kusarudzwa zvinoenderana neawa kana miniti;
8.Transparent, yakakwira-kumhanya, inoshanda network kutaurirana interface, kuti uwane yakakwana data kufambisa uye kutonga pakati pemakomputa nemamita. Iyo yakasarudzika yekudzora yekufambisa basa inogonesa komputa kudzora inoshanda mamiriro uye kuburitsa kwechiridzwa zvakananga. Iyo nguva yekuverenga iyo yekuyera data iri pasi pe10ms;
9. ipa test software, software yekumisikidza uye kunyorera software technology technology;
10.Newe Hardware wachi yekudhinda interface uye yekudhinda unit, kuti uwane bhuku, nguva, alarm yekudhinda basa. Kana iyo yakangwara yekudhinda yuniti ikasarudzwa, anodarika 1 maprinta anogona kugovaniswa nemamita mazhinji.
A.24VDC, Simba rekushandisa ≤10W
B.85-220VAC, Simba rekushandisa ≤10W
Ma standard thermocouples - K, E, B, J, N, T, S
standard kupisa kupisa - Pt100, Pt1000
rectangular shape, sine wave uye triangular wave, amplitude inopfuura 4V, frequency 0 ~ 10KHz (kana zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi).
1.DC 0 ~ 10mA (Mutoro resistance≤750Ω)
2.DC 4 ~ 20mA (Mutoro resistance≤500Ω)
3 nzira ataure goho (Huru vharafu, diki vharafu, pombi), AC220V / 3A; DC24V / 6A (resistive mutoro)
tandard serial kutaurirana interface: RS-232C, RS-485, Ethernet
DC24V, mutoro uri pasi kana wakaenzana ne100mA; DC12V, mutoro uri pasi kana wakaenzana ne200mA
Serial chafariz printa yakananga kudhinda chiridzwa data, chaiyo-nguva yekudhinda zvinhu data, dhinda data inogona kuve yakagadzirirwa
A. blacklit skrini 128 x 64 dot matrix emvura kristal graphic kuratidza
B. nhoroondo yekuwedzera kuyerera, kuyerera kwechinguva, kupisa kwepakati, kureba kwepakati, kuyerera (kusiyanisa ikozvino, kuwanda), wachi, chinzvimbo chealamisi
C. 0 ~ 999999 kukosha kwekuyerera pakarepo
D. 0 ~ 99999999.9999 kukosha kwekuwedzera
E. -9999 ~ 9999 muripo wekupisa
F. -99999 ~ 999999 kuyerera (kumanikidza, kuwanda) kukosha
Kuyera kuyerwa: + 0,2% FS + 1 izwi kana 0.5% FS + 1 izwi; frequency kutendeuka kwechokwadi: 1 kupomba (LMS) kazhinji kuri nani pane 0.2%
A.Power yakaunganidzwa kukosha nguva inopfuura makore makumi maviri
B.Automatic reset, magetsi anowanikwa pasi pekumanikidzwa
C. Abnormal otomatiki reset (Tarisa Imbwa)
D. Re-inogadziriswa fiyuzi, pfupi dunhu chengetedzo
Iine tembiricha muripo, ine hombe vharuvhu / vharuvhu / pombi yekudzora interface, kutanga / kumira / kugadzirisa bhatani interface, 220VAC / 12 ~ 24VDC magetsi
Iine tembiricha muripo, iine yakasarudzika RS485 kutaurirana, ine hombe vharuvhu / vharuvhu / pombi yekudzora interface, kutanga / kumira / kugadzirisa bhatani interface, 220VAC / 12 ~ 24VDC magetsi
Iine tembiricha muripo, ine U disk interface, tanga / mira / reset bhatani interface, 220VAC / 12 ~ 24VDC magetsi
Iine tembiricha muripo, neisina waya kure kutonga, kutanga / kumira / kugadzirisa bhatani interface, 220VAC / 12 ~ 24VDC magetsi
Iine tembiricha muripo, ine RS232 kutaurirana kuti ubatanidze nemafuta ekudhinda, tanga / mira / reset bhatani interface, 220VAC / 12 ~ 24VDC magetsi
Iine tembiricha muripo, neyese nzira 4 ~ 20mA yazvino kuburitsa, tanga / mira /
Iine tembiricha muripo, iine yega RS485 kutaurirana, neyese nzira 4 ~ 20mA yazvino kuburitsa, kutanga / kumira / reset bhatani interface, 220VAC / 12 ~ 24VDC magetsi
Pashure: Gesi Turbine Inoyerera Meter
Zvadaro: Kutonhora Heat Totalizer
Batch Mutungamiriri weValve